Azo omena saka ve ny paracetamol? | Noti saka
Azo omena saka ve ny paracetamol?
Maria Jose Roldan | | curiosities, aretina
Fantatsika fa ny saka dia afaka mijaly amin'ny pathologies maro mandritra ny androm-piainany. Ny sasany amin'izy ireo dia mora hamaritana, satria ny soritr'aretina asehon'izy ireo dia mitovy amin'ireo anarantsika indraindray. Noho io antony io dia misy ny olona manapa-kevitra ny hanome fanafody mitovy amin'ilay notondroina ho an'ny volony.
Fahazarana mampidi-doza io izay mety hanimba ny ain'ny biby, satria na dia manana aretina mitovy amintsika aza izy, dia hafa ny vatana. Ka, raha manontany tena ianao raha afaka manome paracetamol saka anao dia tsia no valiny. Eto no hanazavana ny antony.
1 Inona no atao hoe paracetamol?
2 Fanapoizinana paracetamol amin'ny saka
3 Fambara ny fanapoizinana amin'ny saka sy ny fitsaboana
4 Afaka manome fatra paracetamol kely amin'ny saka ve aho?
5 Fa maninona no misy poizina be?
6 Inona no tokony hataoko raha nisotro paracetamol tsy nahy ny saka?
7 Inona no hataon'ny mpitsabo biby raha mihinana paracetamol ny sakao?
8 Inona no azoko omena ny saka raha marary izany?
Inona no atao hoe paracetamol?
Paracetamol dia fanafody fanoherana ny inflammato sy antipiretika (mampihena ny maripanan'ny vatana raha sanatria misy tazo) izay misy poizina raha raisina amin'ny fatra ambony noho izay naroso. Raha mitranga izany dia mety ho simba be ny aty. Noho izany, tsy tokony hanome paracetamol (na fanafody hafa mihitsy ianao raha tsy manatona mpitsabo biby) amin'ny saka.
Ny fahatsapany an'ity zava-mahadomelina ity dia tena lehibe, betsaka noho ny an'ny alika, hatreto dia hanomboka haneho soritr'aretin'ny fahamamoana eo anelanelan'ny 3 sy 12 ora aorian'izayés ny fihinana. Raha tsy mahazo fitsaboana veterinary ianao dia mety maty ao anatin'ny 24 ka hatramin'ny 72 ora aorian'ny fihinana azy.
Fanapoizinana paracetamol amin'ny saka
Na dia marina aza fa mihevitra ny saka ho anisan'ny fianakavianay izahay, Tsy toa antsika izy ireo raha resaka fahasalamana. Marina fa mizara zavatra maro amin'izy ireo isika: ny fitiavantsika, ny tokantranontsika ary indraindray izay nohanintsika. Ny fizarana ny fiainantsika amin'ny saka dia tena mitondra valiny, fa tsy izay rehetra ataontsika olombelona dia azo zaraina amin'ireo namantsika sakaiza.
Izany dia mitranga amin'ny paracetamol. Ity fanafody ity dia ao an-trano rehetra satria entin'ny olona (olon-dehibe) matetika noho ny aretin'andoha na fanaintainan'ny hozatra. SAINGY ity zava-mahadomelina ity dia poizina be amin'ny saka ary pilina iray monja no mahafaty azy, toy ny omena poizina ianao.
Fambara ny fanapoizinana amin'ny saka sy ny fitsaboana
Raha nisotro paracetamol ny saka dia ho hitanao ireto fambara ireto: fahalemena, mandoa, fivalanana, famoizam-po, volomparasy na volon-koditra manify ny fonontsenan-tsiranoka, fandosirana tafahoatra, olana amin'ny fifohana rivotra sy / na fanintona.
Raha fantatrao fa naka izy, na miahiahy ianao fa manana, tokony hitondra azy any amin'ny vet ianao araka izay tratra. Rehefa tonga any dia hanao lavage vavony izy ireo mba hanalana ireo fanafody sisa tavela.
Afaka manome fatra paracetamol kely amin'ny saka ve aho?
No. Izay fatra paracetamol rehetra dia mety hahafaty ny sakao, satria ny habetsaky ny fanapoizinana dia misy fatra kely dia kely. Tsy misy fatra azo antoka paracetamol omena ny saka. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana dia tsy tokony hanome izany karazana fanafody izany amin'ny saka ianao ary koa, ilaina ny itandremanao azy tsy ho azon'izy ireo hanakanana azy ireo tsy haka izany tsy nahy.
Fa maninona no misy poizina be?
Ny saka dia tsy manana anzima ilaina hamotehana ny acetaminophen ao amin'ny vatany, ka tsy azo antoka. Ary koa, raha mihinana azy izy ireo, dia afaka mamorona fitambaran-javatra mampidi-doza ao anatin'ny vatany. Mety hisy fiantraikany eo amin'ny selao mena ary tsy hivezivezy tsara ny oxygen ao amin'ny vatanao. Ho fanampin'izany, ny fitambaran'ny paracetamol dia mety hahatonga ny atinao tsy hahomby, ka miteraka fahasimbana atiny mafy sy mampidi-doza.
Inona no tokony hataoko raha nisotro paracetamol tsy nahy ny saka?
Raha nomenao acetaminophen saka ianao na mieritreritra fa tsy nahy no naka azy dia mila entinao any amin'ny hopitaly veterinera avy hatrany ianao. Ny fotoana mandalo dia tena ilaina amin'ny fitsaboana ny fanapoizinana aterak'io fanafody io.
Aza miandry ny ampitso maraina raha efa nitranga izany tamin'ny alina, dia mety hahafaty ny saka ny fotoana mandalo. Noho izany, raha nakatona ny birao fiompiana, tsy maintsy mandeha any amin'ny hopitaly vonjimaika mandritra ny 24 ora ianao hitsaboana avy hatrany.
Inona no hataon'ny mpitsabo biby raha mihinana paracetamol ny sakao?
Raha nitondra ny saka haingana tany amin'ny vet ianao, noho ny fihinanana paracetamol, ny mpitsabo anao dia hampitony ny volonao ary hanome azy fanafody hisorohana ny saka tsy hiboka paracetamol bebe kokoa amin'ny vatany. Araka ny efa noresahintsika tetsy ambony, dia ilaina ny lavage vavony.
Izy ireo koa dia mety hanome anao IV sy fikarakarana hafa manampy toy ny oksizenina na fampidiran-dra. Omeo acetylcysteine ​​hanampiana amin'ny fisorohana ny fahasimban'ny poizina. Indrisy, Raha ny saka efa mampiseho mariky ny fanapoizinana paracetamol, dia mety ho faty ihany na dia eo aza ny fikolokoloana biby ... Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanalavirana azy ireo amin'ity karazana fanafody ity ary ny fahatsiarovan-tena ny loza mety hitranga mba hisorohana ny vokatra mahafaty.
Inona no azoko omena ny saka raha marary izany?
Raha mieritreritra ianao fa marary ny saka na tsy salama, tsy maintsy mandeha any amin'ny mpitsabo anao haingana araka izay tratra ianao. Amin'izany dia ho afaka handinika ny saka ianao ary hahafantatra ny fomba hitsaboana azy.
Ny mpitsabo anao ihany no afaka manome fanafody fanaintainana ho an'ny saka. Hiankina amin'ny karazana aretina sy ny toetran'ny biby fiompinao izany. Sanatria, na oviana na oviana, omeo fanafody ny saka ny saka (na olon-dehibe na ankizy).
Na ahoana na ahoana, Ny mpitsabo ny biby foana no manapa-kevitra momba ny karazana fanafody hitondrana ny saka, ny fotoana ary ny fotoana tokony hitondranao azy sy ny fomba. Aza omena na oviana na oviana ny fanafody fiompinao satria fotsiny hoe nisy nilaza taminao hoe tsara izany, satria novakianao tany ho any, na satria tadidinao fa nisy nilaza taminao fa mety izany.
Tsia. Raha tsy salama ny biby fiompinao na mieritreritra ianao fa misy fanaintainana kely dia tsy maintsy hitondra azy any amin'ny mpitsabo ianao ary avelao ny matihanina hanapa-kevitra hoe inona no fanafody homena arakaraky ny karazana aretina mahazo ny biby fiompinao. Aza manapa-kevitra ho azy.
Aza manome fanafody saka mihitsy raha tsy manatona dokotera veterinera aloha. Izy irery no hahafantatra ny fomba ilazana amintsika hoe iza no azontsika omena azy sy amin'ny doka inona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Azo omena saka ve ny paracetamol?
Fa maninona ny saka no mitsaingoka
Inona no atao hoe deworming?